SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Batak (Karo) Batak (Toba) Biak Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Digor Drehu Dutch Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Myanmar Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngangela Nias Niuean Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Ponapean Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Romanian Runyankore Russian Samoan Sango Saramaccan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tongan Tsonga Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urhobo Uruund Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Xhosa Yoruba Zande Zulu
Nei mazuva ano kuine maBhaibheri akasiyana-siyana? Unofunga kuti anobatsira here kana kuti anotoita kuti munhu atadze kunzwisisa. Kuziva kuti ndiani akaashandura uye kuti aizviitirei kunogona kukubatsira kuona aungashandisa.
Akanyora Bhaibheri ndiani uye rakatanga kunyorwa riini?
Bhaibheri rinowanzokamurwa kuva zvikamu zviviri. Chekutanga chine mabhuku 39 ane “mashoko matsvene aMwari.” (VaRoma 3:2) Mwari akafemera varume vakatendeka kuti vanyore mabhuku aya uye vakatora makore anenge 1 100 kubvira muna 1513 B.C.E. kusvikira gore ra443 B.C.E richangoti pfuurei. Mabhuku akawanda akanyorwa muchiHebheru, uye ndosaka tichiati Magwaro echiHebheru, uye anozivikanwa seTestamende Yekare.
Chikamu chechipiri chine mabhuku 27 uye ose ‘ishoko raMwari.’ (1 VaTesaronika 2:13) Mwari akafemera vadzidzi vaJesu Kristu vakatendeka kuti vanyore mabhuku aya uye vakatora makore anenge 60 kubvira munenge muna 41 C.E. kusvikira muna 98 C.E. Akawanda akanyorwa muchiGiriki, uye ndosaka tichiati Magwaro echiKristu echiGiriki, uye anozivikanwa seTestamende Itsva.
Mabhuku aya 66 ndiwo anoumba Bhaibheri, shoko raMwari rakanyorerwa vanhu. Saka chii chakazoita kuti pave nemaBhaibheri akasiyana-siyana? Inzwa zvikonzero zvitatu.
Kubatsira vanhu kuti vagone kuriverenga mumutauro waamai.
Kubvisa zvikanganiso zvaiitwa nevairikopa, zvoita kuti mashoko acho afanane neaiva muBhaibheri rekutanga.
Kushandisa mashoko ari nyore kunzwisisa.
Verenga unzwe kuti zvikonzero izvi zvakashandiswa sei mumaBhaibheri maviri akatanga kushandurwa.
Pachine makore 300 Jesu asati auya panyika, nyanzvi dzechiJudha dzakatanga kushandura Magwaro echiHebheru muchiGiriki. Shanduro iyi yakazozivikanwa seGreek Septuagint. Shanduro iyi yakagadzirirwei? Kuti ibatsire vaJudha vakawanda vakanga vasingagoni kutaura chiHebheru kuti varambe vachiziva ‘zvinyorwa zvavo zvitsvene.’—2 Timoti 3:15.
Septuagint yakabatsirawo mamiriyoni evamwe vanhu vaitaura chiGiriki kuti vazivewo zvinodzidziswa neBhaibheri. Yakavabatsira sei? Purofesa W. F. Howard akati, “Kubvira nechekuma50 C.E, Septuagint ndiyo yakanga yava Bhaibheri reChechi yechiKristu raishandiswa nemamishinari mumasinagogi kuratidza vanhu ‘kubva mumagwaro kuti Jesu ndiye aiva Mesiya.’” (Mabasa 17:3, 4; 20:20) Ndicho chimwe chikonzero chakaita kuti vaJudha vakawanda vapedzisire “vasingachafariri Septuagint,” yakadaro imwe nyanzvi inoongorora Bhaibheri inonzi F. F. Bruce.
Vadzidzi vaJesu pavairamba vachiwana mabhuku eMagwaro echiKristu echiGiriki, vaibva vaabatanidza neSeptuagint, uye mabhuku ese iwayo ndiwo atava kuti Bhaibheri mazuva ano.
Makore anenge 300 kubva pakapera kunyorwa Bhaibheri, Jerome, uyo aiva nyanzvi panyaya dzechitendero, akabudisa Bhaibheri rechiLatin uye rakazozivikanwa seLatin Vulgate. MaBhaibheri echiLatin akanga ariko nechekare, saka Jerome akabudisirei rimwe? Aida “kugadzirisa zvinhu zvakanga zvakanganiswa, kubvisa zvakanga zvawedzeredzwa uye kuisa zvakanga zvasiyirirwa,” rinodaro The International Standard Bible Encyclopedia.
Jerome akagadzirisa zvakawanda zvacho. Asi nekufamba kwenguva, vatungamiriri vechechi vakazoita chikanganiso chakakura! Vakati Latin Vulgate ndiro chete Bhaibheri raifanira kushandiswa, uye mutemo uyu wakaramba uchishanda kwemazana emakore! Pane kuti shanduro iyi ibatsire vanhu kunzwisisa Bhaibheri, nekufamba kwenguva hapana kubatsira kwayakazoita nekuti vakawanda vakanga vasingagoni chiLatin zvachose.
KWAKATANGA KUVA NEDZIMWE SHANDURO
Panguva iyoyo, vamwe vanhu vakaramba vachishandura Bhaibheri, uye rimwe rinonyanya kuzivikanwa nderinonzi Syriac Peshitta rakashandurwa makore ekuma400 C.E. Pakazosvika makore ekuma1300 ndipo pakasimudzirwa basa iri zvekare nechinangwa chekuti munhu anenge wese akwanisewo kuverenga Magwaro mumutauro waanonzwisisa.
Makore ekuma1300 ava kunopera, John Wycliffe wekuEngland akatanga kubudisa Bhaibheri mumutauro wainzwisiswa nevanhu veikoko weChirungu. Nzira yekuprinda yaJohannes Gutenberg yakaita kuti nyanzvi dzeBhaibheri dzikwanise kuprinda uye kuparadzira maBhaibheri mumitauro yakawanda yekuEurope.
MaBhaibheri eChirungu paakatanga kuwanda, vamwe vakatanga kuti hapana chikonzero chekuva nemaBhaibheri akasiyana-siyana emutauro mumwe chete. Mumwe mukuru wechechi ainzi John Lewis wekuma1700 akanyora kuti: “Mamwe mashoko anopedzisira ava echinyakare, saka zvakakosha kuti Shanduro dzekare dzirambe dzichigadziridzwa kuitira kuti dzishandise mutauro unonzwisiswa.”
Mazuva ano, nyanzvi dzeBhaibheri dzava kunyatsokwanisa kuongorora shanduro dzekare. Vanonyatsonzwisisa mitauro yakashandiswa pakatanga kunyorwa Bhaibheri uye vava nezvinyorwa zvekare zveBhaibheri zvakawanikwa munguva pfupi yapfuura. Izvi zvinovabatsira kuziva kuti muBhaibheri rekutanga makanga makanzi kudii.
Saka kuva neshanduro dzemaBhaibheri dzemazuva ano kwakanaka. Kana vanhu vakashandura nemwoyo wekuda kukudza Mwari, shanduro idzodzo dzinogona kutibatsira. Asi mamwe acho anoda kungwarirwa. *
^ ndima 24 Verenga nyaya iri muNharireyomurindi yaMay 1, 2008 yakanzi “Ungasarudza Sei Shanduro yeBhaibheri Yakanaka?”
ZITA DZVENE RAMWARI RINOWANIKA MUBHAIBHERI
Zita dzvene raMwari muchidimbu cheSeptuagint yaishandiswa panguva yakararama Jesu
Shanduro yeNyika Itsva yeMagwaro Matsvene inoshandisa zita dzvene raMwari rekuti Jehovha muMagwaro echiHebheru uye muMagwaro echiKristu echiGiriki. MaBhaibheri akawanda mazuva ano haashandisi zita iroro. Anoshandisa rekuti “Ishe.” Vashanduri vawo vanoti zita raMwari, mumutauro wechiHebheru (YHWH), rakanga risimo mushanduro yeMagwaro echiHebheru inonzi Greek Septuagint. Asi ichokwadi here?
Nechepakati pemakore ekuma1900, pakawanika zvidimbu zvekare zveSeptuagint zvaishandiswa panguva yakararama Jesu. Zvine zita dzvene raMwari rakanyorwa nemabhii echiHebheru. Zvinoita sekuti vanhu vaikopa Bhaibheri ndivo vakazobvisa zita dzvene iri vachibva varitsiva nerechiGiriki rekuti Kyʹri·os rinoreva kuti “Ishe.” Shanduro yeNyika Itsva yakadzosera zita dzvene iri pese paraiva rabviswa muMagwaro.
MASHOKO ARI MUBHAIBHERI AKACHINJWA HERE?
Mupumburu waIsaya une makore 2 000 wakawanikwa paGungwa Rakafa. Zvirimo zvakafanana nezviri muBhaibheri ratinaro mazuva ano
Vanhu vaikopa Bhaibheri vanewo zvavakakanganisa Asi zvikanganiso izvozvo hazvina kubva zvaita kuti mashoko arimo achinje. “Hapana dzidziso inokosha yechiKristu inganzi yakakanganiswa.”—Our Bible and the Ancient Manuscripts.
VaJudha havana kunyanya kuita zvikanganiso zvakawanda pavaikopa. “Vanyori vechiJudha vakararama makore akatanga chiKristu vakaedza chaizvo kukopa zvakarurama Magwaro echiHebheru.”—Second Thoughts on the Dead Sea Scrolls.
Semuenzaniso, pamipumburu yakawanikwa paGungwa Rakafa, paiva newaIsaya uye ndewekare nemakore 1 000 kana uchienzaniswa nemimwe mipumburu iriko. Mupumburu wacho wakafanana here nezviri mumaBhaibheri mazuva ano? “Musiyano waungangowana ndeweshoko rinogona kunge rakangowedzeredzwa kana kuti rakabviswa.”—The Book. A History of the Bible.
Zvava nyore kuona uye kugadzirisa zvikanganiso zvaiitwa nevanhu vakanga vasina unyanzvi pakukopa, zvakadai sekuchinjaniswa kwemabhii kana kuti kwemashoko. “Hakuna rimwe bhuku rekare rinotsigirwa neumboo sezvinoitwa Testamende Itsva.”—The Books and the Parchments.
“Kuvatendi vanenge vachityira kuti zvimwe mashoko ari muBhaibheri akachinja, zivai kuti zviri muBhaibheri ndizvo chaizvo uye zvakarurama pasinei nekuti mashoko acho aikopwa nemaoko.”—The Book. A History of the Bible.
Saka Bhaibheri rakachinjwa here? Aiwa!
Sezvo Bhaibheri riri bhuku rekare, tingava sei nechokwadi chekuti zvarinotaura hazvina kuchinja?